Amaphupho ngotshwala – iAfrika
Amaphupho ngotshwala besintu ayibika lokuthi idlozi lakho alijabulile. Lokho kusho ukuthi kukhona okuthile okumelwe ukulungise okuqondene nomsamo wakho, ngakho ke kubalulekile ukuba uqaphele indawo okuyo nabantu abasuke bekhona kulelo phupho. Isibonelo nje: uma uphupha uphuza kuleyo ndawo kukhona nengane oyizalayo, lokho kungaba yisixwayiso sokuthi kusamelwe uyenzele umcimbi wokuyibika emsamo ngendlela efanelekile leyongane, kungaphinda futhi kube ukukukhumbuza ukuthi kusamelwe uyenzele imbeleko uma ubungakaze uyenzele ngaphambilini ikakhulukazi uma kuyingane yokuqala.
Uma uphupha uphisa utshwala kusho ukuthi maduzane uzovakashelwa ngumuntu osuka kude. Uma uphupha uphuza utshwala ebha noma endaweni yokuphuza lokho kusho ukuthi uzokwenza okuthile okuzokudalela isitha maduzane.
7 thoughts on “Amaphupho ngotshwala”
Kuchazani kuphupha uphuza u ubhiya uhamba nomuntu ozwana naye
Kusho ukuthini uma uphupha wenza utshwala besizulu ufake neduku emahlombe
Ngiphuswe ngumuntu athi ngingena eShop edayisa utshwala ngiphethe ukiya ngesandla
Ngicela kubuza kuchazani kuphupha ukhamba lotshwala lunganalutho uluphethe
Kusho ukuthini ukuphupha uphethe ukhamba lotshwala lungenalutho
Samkelisiwe Veronicah Nxumalo
Kusho ukuthin ukuphupha uphisa utshwala Kodwa ubenzela kamakhelwane umama wakhona obenzayo Kodwa bungobami
Kuchazani ukuphupha isoka lakho lize kini,lidakiwe selibhoxe odakeni ngecathulo,nilale endlini kamkhulu wami osewashona nengubo ziconselw imvula lancane?